သဒ္ဒာစည်းမျဉ်း (၁၁) ခု - အပိုင်း (၂) - Myanmar Network
သဒ္ဒာစည်းမျဉ်း (၁၁) ခု - အပိုင်း (၂)
Posted by Myanmar Network on July 6, 2012 at 11:05 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ပစ္စုပ္ပန်အပြင် အခြားအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးတဲ့ simple present tense
simple present tense ကိုသုံးရင် အလေ့အထဖြစ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ဆိုလိုတယ်။ အမြဲလုပ်နေကျ ဒါမှမဟုတ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း လုပ်တာ စသည်ဖြင့် အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်တယ်။ verb form ကတော့ ဘာမှ ထပ်ပြောင်းနေစရာ မလိုဘဲ V1 လို့ခေါ်တဲ့ ပထမဆုံး ပုံစံကို သုံးလိုက်ရုံပါဘဲ။
Mary likes dogs. မေရီက ခွေးတွေကို နှစ်သက်တတ်တယ်။
I don't walk Mary's dog. ဒို့က မေရီရဲ့ခွေးကို လမ်းလျှောက်မခေါ်ဘူး။ (ခေါ်လေ့မရှိဘူး။)
Mary and I drink tea every Tuesday together. မေရီနဲ့ ဒို့နဲ့ အင်္ဂါနေ့တိုင်း အတူ လက်ဖက်ရည်သောက်ကြတယ်။ (ပုံမှန်)
ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ဆဲကို ပြတဲ့ ဖြစ်ဆဲ progressive tense
မျက်မှောက်ဖြစ်နေဆဲလို့ ဆိုလိုချင်ရင် present progressive tense ကို သုံးရတယ်။ ပစ္စုပ္ပန် အတိတ် အနာဂတ် progressive tense အားလုံးက "-ing" နဲ့ ဆုံးပြီး ရှေ့မှာလည်း အကူကြိယာ helping verb ပါတဲ့အတွက် သိလွယ်တယ်။ helping verb ကတော့ ဘယ်သူလဲ ဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးတယ်။ present progressive tense ဆိုရင် အကူကြိယာ helping verb တွေအဖြစ် "to be"ကို သင့်တော်တဲ့ပုံစံ ပြောင်းပြီး သုံးပေးရတယ်။
I am drinking Lapsang Souchong tea.ဒို့က လက်ဆန်ဆူချောင် လက်ဖက်ရည်သောက်နေတယ်။
The barking dogs outside are driving me crazy. အပြင်မှာ ခွေးတွေဟောင်နေလို့ စိတ်တိုလာပြီ။
Mary is playing with her hyperactive dog. မေရီက သူ့ရဲ့ အငြိမ်မနေနိုင်တဲ့ခွေးနဲ့ ဆော့နေတယ်။
ရိုးရိုးအတိတ်ကာလ Simple Past
အတိတ်ကာလဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုလျှင် V2 ဖြစ်အောင် ပုံမှန် လနမဘ ကို "-ed" ထည့်ပေးရတယ်။ verb form ပုံမှန် မဟုတ်ရင်တော့ နဲနဲ ပိုပြီး မှတ်ရမယ်။ အချို့က သူ့စည်းမျဉ်းနဲ့သူ ရှိတယ်။ ဥပမာ "drink" သောက်သည် ဆိုရင်"drank" သောက်ခဲ့သည် ဖြစ်သွားတယ်။ verb အများစုကတော့ "-ed" ထည့်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
I drankalot of Lapsang Souchong tea yesterday, but Mary didn't. ဒို့မနေ့က လက်ဆန်ဆူချောင် လက်ဖက်ရည် အများကြီး သောက်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် မေရီကတော့ မသောက်ခဲ့ဘူး။
The dogs stopped barking two seconds ago, and I am feeling better. ခွေးတွေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂စက္ကန့်က အဟောင်ရပ်သွားပြီ ဒို့လည်း နားအေးသွားတယ်။
Mary played fetch with her hyperactive dog. မေရီက သူ့ရဲ့ အငြိမ်မနေနိုင်တဲ့ခွေးကို ပစ္စည်းပစ်ပေးလိုက်၊ ခွေးက ပြန်ချီယူလာလိုက်နဲ့ ဆော့နေတယ်။
Perfect Tense တွေအသုံးပြုနည်း
Perfect Tense တွေကိုလည်း သုံးရင်းနဲ့ဘဲ ကျွမ်းကျင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ သဒ္ဒာစည်းမျဉ်း ၁၁ခုပြည့်အောင် နောက်ထပ် ၃ခု ထပ်ပေးလိုက်မယ်။ ဒါတွေကို မှတ်မိမယ်ဆိုရင် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မယ့် လမ်းပေါ်ကို ရောက်နေပြီလို့ ဆိုရမယ်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ ပြီးစီးပြီးတဲ့ Present Perfect
present perfect က မသုံးတတ်သူတွေအတွက် ရှုပ်ထွေးမှု ရှိနိုင်တယ်။ သဒ္ဒာစည်းမျဉ်းတွေထဲမှာ အရေးကြီး ဆုံး စည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ present perfect ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ဖြစ်ရပ်က ဖြစ်ပြီးနေပြီး ဒါပေမယ့် အဲဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချိန်ကာလကတော့ မပြီးဆုံးသေးဘူးလို့ ဆိုလိုတယ်။ သုံးတဲ့အခါ V3 ကို helping verb အကူကြိယာနဲ့ တွဲသုံးတယ်။ present perfect အတွက် သုံးရမယ့် helping verb အကူကြိယာကတော့ "to have" ဖြစ်တယ်။
I have drunk three cups of Lapsang Souchong tea today. ကနေ့ လက်ဆန်ဆူချောင် လက်ဖက်ရည် ၃ခွက် သောက်ပြီးပြီ။
Mary's hyperactive cur dog has bitten me three times so far. မေရီက သူ့ရဲ့ အငြိမ်မနေနိုင်တဲ့ မျိုးမစစ်ခွေးက ဒို့ကို ကိုက်တာ အခုထိ ၃ခါ ရှိသွားပြီ။
Mary has walked her hyperactive poodle 100 times this week. မေရီက သူ့ရဲ့ အငြိမ်မနေနိုင်တဲ့ ပူဒယ်မျိုး ခွေးကလေးကို ဒီအပတ် လမ်းလျှောက်ခေါ်တာ အကြိမ် ၁၀၀ ရှိသွားပြီ။
တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ကြိယာတစ်လုံးစီရဲ့ V3 ကို သိအောင် ကျက်မှတ်ထားဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီဆိုတဲ့ Present Perfect Progressive
လုပ်ဆောင်ချက်ကလည်း မပြီးဆုံးသေးဘူး၊ အချိန်ကာလကလည်း မပြီးဆုံးသေးဘူးလို့ ဖော်ပြချင်ရင် Present Perfect Progressive ကို သုံးရတယ်။ အဲဒါဆို အကူကြိယာ "to be" နဲ့ "to have" နှစ်မျိုးလုံး ပါမှာဖြစ်တယ်။ "-ing" ပုံစံကို သုံးရမှာဖြစ်တယ်။
I have been drinking tea all day. ဒို့တစ်နေ့လုံး လက်ဖက်ရည်သောက်နေတာ။
Mary's dog has been barking like crazy since it was born. မေရီရဲ့ခွေးက မွေးကတည်းက အသည်းအသန် ဟောင်နေတာ။
အတိတ်ကပြီးစီးခြင်းပြ Past Perfect
အတိတ်ကာလမှာ ဖြစ်ရပ် ၂ခု ရှိတဲ့ပြီး အဲဒီထဲက တစ်ခုက အရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြချင်တဲ့အခါ သုံးရတယ်။ V3 သုံးပြီး ရှေ့မှာ အကူကြိယာ"had" ထည့်ပေးရမယ်။
By the time I drank one cup of Lapsang Souchong, Mary's dog had barkedamillion times. လက်ဆန်ဆူချောင် လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်သောက်ခဲ့ချိန်မှာ မေရီရဲ့ခွေးက အကြိမ်တစ်သန်းဟောင်ပြီးနေပြီ။
I had not yet eaten breakfast when Mary walked her dog. မေရီ သူ့ရဲ့ခွေးကို လမ်းလျှောက်ခေါ်သွား တုံးက ဒို့ မနက်စာ မစားရသေးဘူး။
Mary couldn't stop laughing; her dog had bitten me again. မေရီက ရယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူး၊ သူ့ခွေးက ဒို့ကို ကိုက်လိုက်ပြန်တယ်လေ။
grammar.yourdictionary.com မှ 11 Rules of Grammar ဆောင်းပါးအား ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Permalink Reply by Ratan Biswas on July 19, 2012 at 18:38
Permalink Reply by upokun on July 19, 2012 at 23:20
Permalink Reply by Saint San on July 20, 2012 at 9:50
It"s extremely useful for me.
Permalink Reply by myatsumon on July 20, 2012 at 13:33
Permalink Reply by thet hnin on July 20, 2012 at 17:13
Thank you so much. It's very useful for me.
Permalink Reply by Thida Kyaing on July 21, 2012 at 11:13
Permalink Reply by barbulay on July 21, 2012 at 15:16
Permalink Reply by myo myint htun on July 21, 2012 at 16:27
Permalink Reply by 2cvxyi5hvu8wq on July 21, 2012 at 19:30
Permalink Reply by Su Su Win Hlaing on July 21, 2012 at 21:23
Permalink Reply by Zaw Win on July 23, 2012 at 13:57
It is very applicable for us.
Thanksalot of you good minded.
Permalink Reply by oneonekaw on July 29, 2012 at 14:51